भारत भर्सेस पाकिस्तान : दाउमा भारतको रेकर्ड, सरप्राइज देला पाकिस्तानले ? - भारत भर्सेस पाकिस्तान : दाउमा भारतको रेकर्ड, सरप्राइज देला पाकिस्तानले ? -
काठमाडौँ । आपसी राजनीतिक सम्बन्ध चिसिएको समय दुबईको गर्मीमा भारत र पाकिस्तानका क्रिकेट टिम टी–२० विश्वकपमा भिड्दैछन् । यो खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ बजेर ४५ मिनेटमा सुरु हुनेछ । १ अर्ब ३९ लाखभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको भारत र २२ करोडभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको पाकिस्तानबीचको क्रिकेट खेल विश्वका धेरै जनसङ्ख्याले सरोकार राख्ने खेलमध्ये एक हो । त्यही कारण, यी दुवै टिमबीचका हरेक खेल महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । अझै, विश्वकपमा त स्वाभाविक रूपमा टिमका खेलाडीहरूमाथि जित्नुपर्ने दबाब पर्ने नै भयो ।
यसपटक विश्वकपअघि दुवै टिमले २–२ वटा अभ्यास खेल खेलेका छन् । पाकिस्तानले पहिलो अभ्यास खेलमा वेस्ट इन्डिजलाई ७ विकेटले हराएको थियो । दोस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग अन्तिम बलमा पराजित भयो । अर्कोतर्फ भारतले इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाविरुद्ध जित हासिल गर्‍यो । भर्खरै मात्र युएईमा आयोजना भएको इन्डियन प्रिमियर लिग ९आईपिएल० मा प्रतिस्पर्धा गरेकाले भारतीय खेलाडीहरू यहाँको मौसमसँग घुलमिल भइसकेका छन् । भारतका लागि यो सुखद पक्ष हो ।